सात महिनाकी गर्भवती उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण दुखद निधन – Sandesh Press
सात महिनाकी गर्भवती उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण दुखद निधन
सप्तरीको उत्तरी भेगमा रहेको सप्तकोशी नगरपालिकाका उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण आज मृत्यु भएको छ । विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा उपचाररत उहाँको अस्पतालमै मृत्यु भएको कञ्चनरुप नगरपालिका निवासी उत्तम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
दुई साताअघि ज्वरो, रुघाखोकी तथा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना गरिएको थियो । त्यसपछि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनुभयो ।
गर्भवतीसमेत रहनुभएकी उहाँलाई १० दिनअघि अस्पताल भर्ना गरी आइसीयूमा राखिएको थियो । तीन दिनअघि मात्रै उहाँको पेटमा भएको बच्चा पनि मृतावस्थामा निकालिएको थियो । बच्चाका कारण पनि उहाँलाई थप असहज भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
उपचारका क्रममा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उहाँलाई भेन्टिलेटरमा सारिएको थियो । मृतक चौधरीका पति र सात वर्षीय एक छोरा छन् । यससहित सप्तकोशीमा कोरोनाका कारण मर्नेको सङ्ख्या तीन पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
Prevज्वरो र रुघाखोकी आइ अस्पताल पुगेका एकै समुदायका ९ जनाको मृत्यु
Nextघाटमा बुबाको दाहसंस्कार गर्दैगर्दा छोराको मृत्युको खबरले स न्नाटा छा यो …..
कस्तो बिडम्बना ! कोरोनामुक्त भएको २४ घण्टा नपुग्दै ४४ वर्षीय यी युवकले गुमाए आफ्नो ज्यान
अहिले सम्मकै बिषेश भिडियो: अमाजु भावना ढकाल पहिलो पटक मिडियामा
भाइरस संक्रमणबाट आँखारोेग विशेषज्ञ प्राडा.पूज्यश्री कार्कीको निधन
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (9840)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (3740)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (2914)
सं’ क्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आ’ इसियुमा राखेर उ’ पचार सुरु (2843)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (1787)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (1670)
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमण (1602)
मन्त्रिको गाडी समात्ने बहादुर प्रहरी, भन्छन- ‘ठूलो सानो भनेर जो कोहीको पनि छोड्ने कुरा हुँदैन’ (1576)
यसरि भयो पशुपति आर्यघाटमा उज्वलको अन्तिम संस्कार (केहि तस्विर सहित) (1358)
केहि मिनेटको अन्तरालमा जन्मिएका जुम्ल्याहा दाजुभाई एकैपटक संसार छोडेर गए (1331)
नयाँ प्रेम पाए पुरानोलाई भूल्न समय लगाउँदैनन् यी राशिका युवती, छिट्टै हुन्छन् बोर
जिन्दगीभर नछुट्ने यी राशिका मायालु जोडी, कहिल्यै झगडा गर्दैनन्